မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့က လူကုန်ကူးခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်သဘောတူ - Xinhua News Agency
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့က လူကုန်ကူးခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်သဘောတူ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Tijuana မြို့ရှိ အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်အတားအဆီးနံဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်နေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ ဇွန် ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သည် လူကုန်ကူးခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် မက္ကဆီကို သမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador နှင့် အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန် ဒုတိယသမ္မတ ကာမာလာ ဟဲရစ် (Kamala Harris) တို့ကြား ဇွန် ၈ ရက်က ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးအတွင်း သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ လုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ပိုင်နက်တွင် လူကုန်ကူးမှုတွင် ပါဝင်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကွင်းဆက်များ အားဖျက်ပစ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး သတင်းအချက်အလက်နှင့် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုများကို ဝေမျှသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မက္ကဆီကို သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
“နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေ အစည်းအဝေးက လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မှုအပေါ် ၎င်းတို့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ ဦးစားပေးချက်ကို ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစိုးရတွေအတွက် မူဘောင်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်” မက္ကဆီကို အစိုးရက ပြောခဲ့သည်။
“သူတို့အနေနဲ့ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပဖို့လည်း သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ရက်ကိုတော့အတည်ပြုရဦးမှာပါ” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ဟဲရစ်သည် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်၌ အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရ တာဝန်ယူချိန်မှစ၍ ပထမဆုံး တရားဝင်ပြည်ပခရီးစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဂွာတီမာလာမှ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက် ညပိုင်းက မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟဲရစ်သည် ဂွာတီမာလာ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့် အယ်လ်ဆာဗေးဒိုးမှ မြောက်ပိုင်းတွင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုကို ဖြတ်တောက်နိုင်ရေး ဗဟိုအမေရိက၏ မြောက်ပိုင်းတြိဂံဒေသ၌ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် နားလည်မှုစာချွှန်လွှာကို နှစ်နိုင်ငံ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် မကြာမီ မက္ကဆီကိုစီးတီးရှိ National Palace တွင် မက္ကဆီကို သမ္မတ Lopez Obrador နှင့် အခြားသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သမ္မတရုံး၏ အဆိုအရ နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ပူးတွဲကိုင်တွယ်ရန် “အပြန်အလှန် လေးစားမှုနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ် အခြေခံထားတဲ့ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်”အတွက် ၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်ကို နှစ်နိုင်ငံက အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အထူးသဖြင့် အရွယ်မရောက်သေးသူများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းမှ အကျိုးအမြတ် ရရှိနေသည့် လူကုန်ကူးသူများအတွက် သားကောင်ဖြစ်ကြောင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များက ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံတို့သည် COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုတွင် တိုးတက်မှုရှိရန်၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အမေရိကန်-မက္ကဆီကို-ကနေဒါ သဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး မြှင့်တင်ရန် ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ (Xinhua)
Mexico, U.S. agree to create task force to fight human trafficking
MEXICO CITY, June 8 (Xinhua) — Mexico and the United States agreed Tuesday to formaspecial task force to combat human trafficking, duringameeting between Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and visiting U.S. Vice President Kamala Harris.
The task force will share information and intelligence, with the purpose of dismantling criminal rings involved in human trafficking in Mexican territory, Mexico’s presidency said inastatement.
“The meeting of the two delegations served asaframework for the governments to reiterate their conviction and priority on protecting human rights,” the Mexican government said.
“They also agreed to holdahigh-level meeting on security cooperation, with the date yet to be defined,” it added.
Harris arrived in Mexico on Monday night from Guatemala, as part of her first official trip abroad since U.S. President Joe Biden’s administration took office on Jan. 20.
Harris met with Lopez Obrador and other officials at the National Palace in Mexico City, shortly after both countries signedamemorandum of understanding to promote development in Central America’s Northern Triangle to curb migration north from Guatemala, Honduras and El Salvador.
According to the president’s office, both countries reinforced their vision of “a bilateral relationship based on mutual respect and cooperation,” to jointly tackle binational and regional challenges.
According to Mexican authorities, minors especially are “prey” for human traffickers who profit from irregular migration.
Both countries also reaffirmed their commitment to making progress inacoordinated and joint manner against COVID-19, and to promoting the region’s economy through the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) on free trade. Enditem
Photo taken on Jan. 10, 2019 shows people beside the U.S.-Mexico border barrier in Tijuana, Mexico. A large number of migrants from Central America have failed to detour around the border barrier to enter the United States. (Xinhua/Xin Yuewei)